Homeरोचक / विचित्रकाठमाडौँमै घरको छतमा तरकारी खेती गरेर मनग्य आम्दानी, कसरि गर्ने कौसी खेती ? (भिडियो हेर्नुस)
August 2, 2019 Spnews रोचक / विचित्र, समाचार Comments Off on काठमाडौँमै घरको छतमा तरकारी खेती गरेर मनग्य आम्दानी, कसरि गर्ने कौसी खेती ? (भिडियो हेर्नुस)
बढ्दै गएको शहरीकरणसंगै घर निर्माणसमेतमा वृद्धि भएपछि जग्गा अभावका कारण तरकारी खेती गर्न नपपाउनेहरुका लागि समेत घरको छत व्यवसायिक तरकारी खेतीको विकल्प बन्न थालेको छ ।
बढ्दो सहरीकरणसंगै जग्गा खरिदविक्री गर्नेले जग्गा प्लटिङ्ग गर्दै जाने र त्यसमा घर निर्माण हुदै गएपछि जग्गाको अभावका कारण तरकारी खेती गर्न नपाउनेहरुका लागि भक्तपुरमा रहेका गोपाल श्रेष्ठ उदाहरणीय पात्र बन्न पुग्नुभएको छ ।
उहाले आफूले निर्माण गरेको घरको छतमा व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न थालेसंगै परिवारलाई तरकारीको अभाव हट्नुकै साथै यसैबाट राम्रो आम्दानीसमेत गर्न थाल्नु भएको छ । यसबाट परिवारलाई ताजा तरकारी प्रयोग गरेसंगै उब्रिएको तरकारी बजारमा बेच्ने गरेको कृषक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कसरि गर्ने कौसी खेती ? (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौँमै घरको छतमा तरकारी खेती गरेर मनग्य आम्दानी
‘भ्वाईस अफ नेपाल’की श्रेया राईको सुमधुर स्वरमा सजिएको तीज गीत ‘जुराईदेऊ सोझो पोई’ सार्वजनिक (भिडियो)